François Schuiten dia mamolavola ny afisy amin'ny Fetiben'ny Comic Strip Bruxelles 2019
Home » Lahatsoratra farany farany » Kolontsaina » François Schuiten dia mamolavola ny afisy amin'ny Fetiben'ny Comic Strip Bruxelles 2019
Associations News • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Hospitality Industry • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ho an'ity andiany fahafolo ity, manomboka amin'ny 13 ka hatramin'ny 15 septambra 2019, ny Fetiben'ny Comic Strip Bruxelles 2019 dia mamoaka ny mpanakanto ao ambadiky ny afisiny vaovao. Mba hankalazana ny famoahana ny rakitsary farany Blake sy Mortimer, The Last Faraona, ny afisin'ny festival dia noforonina tsy iza fa ny mpanakanto boky tantara an-tsary Brussels, François Schuiten. Toy ny rakikira ihany, dia ho lasa mpanakanto afisy ao Bruxelles Laurent Durieux izay manampy loko. Hisokatra ny zoma 13 septambra ny festival ka andro natokana, ankoatry ny hafa, ho an'ny sekoly. Fomba tsara hanombohana ny taom-pianarana.
Hatramin'ny namoronana azy tamin'ny 2010 tamin'ny alàlan'ny visit.brussels dia efa lasa lavitra ny Festival Comic Strip. Nalefa taorian'ny herintaona natokana ho an'i Bruxelles momba ny zavakanto faha-9, ny Festival Comic Strip dia mandray mpitsidika maherin'ny 100,000 sy mpanakanto tantara an-tsary mihoatra ny 250 isan-taona.
Amin'ity taona ity dia hatao ao Brussels Park indray ny festival, izay hananganana ny marquees nentim-paharazana manomboka amin'ny 13 ka hatramin'ny 15 septambra. Ary koa ny matso nentim-paharazana balaonina goavambe natao pirinty tamin'ny takelaka komika lehibe indrindra, manome lanja ireo mpankafy tantara an-tsary ny mpanatrika ny lahateny, ny fisavana, ny fanaovana sonia boky ary ny hetsika hafa izay misokatra ho an'ny rehetra.
Ho an'ity andiany faha-10 ity, ny hetsika tsy azo lavina ho an'ireo mpankafy tantara an-tsary dia efa naneho zava-baovao roa lehibe:
• Mazava ho azy fa ao amin'ny festival i François Schuiten, mpamolavola ny afisin'ny festival. Ary koa ny fotoam-panasoniavana boky, ny mpanakanto dia handray anjara amin'ny lahateny manokana momba ny duo malaza, miaraka amin'ny mpanakanto andiany '. Fotoana tsy manam-paharoa hiresaka momba ny asan'i Edgar P. Jacobs sy ny fitaomana ananany ankehitriny amin'ireo mpanakanto tantara an-tsary. Hovaliana ny fanontaniana amin'ny lohahevitra toy ny sanganasa tany am-boalohany, na ny ifantohan'ity toko farany ity any Bruxelles.
• Hisokatra manomboka amin'ny 10 maraina ny festival amin'ny zoma 13 septambra. Afaka manantena fandaharana miloko be dia be ny sekoly. Avy amin'ny fampidirana ny teti-dratsy, amin'ny atrikasa momba ny fanoherana ny fanavakavaham-bolonkoditra miaraka amin'i Lilian Thuram, tamin'ny alàlan'ny fisongadinan'ny tantaran'ny Ady Lehibe Faharoa niaraka tamin'ny mpanoratra ny andiany "Zanaky ny fanoherana" - hetsika tsy mahazatra maro no miandry azy ireo. Afaka mandray anjara amina hetsika vaovao maromaro ny sekoly nefa tsy misoratra anarana mialoha, toy ny:
• Ilay bokikely mpikaroka tantara an-tsary kely: Amin'ny alàlan'ny fanarahana lalana samihafa izay sady mahafinaritra no lohahevitra dia hanomboka hahita ireo marquees an'ny Festival Comic Strip ny ankizy.
• Fampirantiana "The Children of the Resistance": lohataona 1944, ary mpanamory fiaramanidina mpiara-dia iray no very tany Belzika nobodoina… Ataovy ao anaty kiraron'ny zaza iray mpanohitra ianao hahafahany manampy azy hiverina any Angletera hahafahany miverina miady!
Ny Comic Strip Festival ary ny famoahana an'i Lombard dia manolotra fampirantiana miorina amin'ny andiany "The Children of the Resistance" an'i Benoît Ers sy Vincent Dugomier. Feno fahafinaretana ary namboarina manokana ho an'ny tanora mpanatrika (8-12 taona), ny fampirantiana dia manazava amin'ny fomba fanabeazana ny lohahevitra lehibe ao ambadiky ny Ady Lehibe Faharoa sy ny Fanoherana any Frantsa sy Belzika. Ny fihazana harena dia manome fotoana ny ankizy hiditra amin'ny kiraron'ny mpikambana iray ao amin'ny fanoherana: mandritra ny fampirantiana dia tsy maintsy mamaha fambara izy ireo hanampiana ilay mpanamory fiaramanidina niverina tany Angletera.
Fanontana fahatelo amin'ny loka Atomium Comic Strip
Nihena ny sahan'ny Comic Strip tato anatin'ny taona vitsivitsy. Vao mainka mihasarotra ny mitady fivelomana ireo matihanina amin'ny tantara an-tsary.
Nandritra izay roa taona lasa izay, ny visit.brussels dia niara-niasa akaiky tamin'ireo mpiara-miasa aminy hanohana an'ity kanto ity, niaraka nanambatra ireo orinasa efa misy hanome loka, izay vola ny ankamaroany, hahafahan'ireo mahazo mamatsy vola ny asany.
• Ny Loka Raymond Leblanc ho an'ny Mpanakanto Tanora - Fondation Raymond Leblanc (loka: 20,000 Euros natolotry ny Vaomieran'ny Vondron'olona frantsay (COCOF) sy Futuropolis).
• Ny valisoa azon'ny federasiona Wallonia-Brussels federaly –Fanompoana kolontsaina ho an'ny federasiona Wallonia-Bruxelles (loka: 10,000 Euros)
• Ny Loka Atomium any Bruxelles -Ny filoha-filohan'ny Faritra Bruxelles (7,500 Euros) ary koa ny fiantohana avy amin'ny BX1
• Ny PREM1ÈRE Loka Novel an-tsary - RTBF (20,000 Euros of space advertising)
• Ny loka ho an'ny tantara an-tsary Cognito - Fondation Cognito (3,000 Euros)
• Ny loka Le Soir Comics Reportage - Le Soir (20,000 Euro ny habaka fanaovana dokam-barotra)
• Ny lokan'ny Komikom-pirenena Atomium - Le Cœur à lire (5,000 XNUMX Euros)
• Vaovao amin'ny taona 2019: Ny loka Vandersteen (vaovao amin'ny taona 2019) - Sabam for Culture & Stripgids (5,000 Euros)